कांग्रेसमा बिरासत नै चाहिन्छ भने त्यसको लागि को हो त ? « नेपालबहस
कांग्रेसमा बिरासत नै चाहिन्छ भने त्यसको लागि को हो त ?
डा. शेखर कोइरालाको अभियान र मिहिनेतलाई कमजोर मान्नु हुँदैन ?
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७८, सोमबार १९:१३
४ साउन, काठमाडाैं । आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा लक्षित हुँदै साउन २ गते शनिबार महाराजगन्जस्थित कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवासमा डा.शेखर कोइराला र नेत्री सुजाता कोइरालाको ‘लन्च मिटिङ’ भएको खबरले महाधिवेशन राजनीतिमा चासो राख्नेहरूका बीच महत्व पाएको छ । उनीहरूको यो प्रयास कांग्रेस सभापतिमा कोइराला परिवारबाट एकल उम्मेदवार दिन लक्षित छ ।
केही हप्ताअघि कांग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधिले बीपी पुत्र डा. शशांक कोइराला र गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहलाई निम्त्याएर आयोजना गरेको र त्यसपछि दुईतीन राउन्ड चलेको त्यस्तै लन्च बैठकलाई दृष्टिगत गर्दै कोइराला परिवारको यो राजनीतिक लन्च–मिटिङ्लाई अर्थ लगाउनेहरू पनि छन् ।
उक्त तीन नेतापुत्रहरूबीच लगातार सामूहिक ‘लन्च’ बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमानले चौधौं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र डा. शेखर कोइरालालाई सभापति बन्नबाट रोक्न सकेमा मात्र सभापति पद आफ्नो वृत्तमा आउने निष्कर्षमा त पुगेका छन् । तर उपयुक्त रणनीति बनाउने कार्यमा यी तीनैजना नेतापुत्रहरू पछाडि नै छन् ।
नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनले जनताको लागि दिने सन्देश के हुने ? जनसरोकार र जनभरोसा जगाउने कार्यक्रम कसरी हुने ? कि यो ‘राष्ट्रिय भेला,’ वा पाँचवर्षे कुम्भमेला जस्तो मा सीमित हुने ? स्थापित नेतृत्वलाई रबर स्टाम्पको अनुमोदन गरेर सकिने छाँट छ कि नेतृत्वमा नयाँ अनुहारको साथै नयाँ मानसिकता, नयाँ कार्यशैली पनि हुनेछ ? चहलपहल निकै छ ।
अर्कातिर कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसीले सभापतिका दावेदार आठजना नेताहरूलाई एकैठाउँ जम्मा गरेर ‘हाई टी मिटिङ्’ को अभियान चलाए । उनको कोशिश आठजनाबाट विभिन्न पदका लागि मिलेर एउटै प्यानलको रुपमा उम्मेद्वारी दिनुपर्ने आग्रहमा लक्षित छ । उपलब्ध र अनुकूल नेताहरूका बीच यस्तो कोठे बैठक अरु पनि हुँदै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनले जनताको लागि दिने सन्देश के हुने ? जनसरोकार र जनभरोसा जगाउने कार्यक्रम कसरी हुने ? कि यो ‘राष्ट्रिय भेला,’ वा पाँचवर्षे कुम्भमेला जस्तो मा सीमित हुने ? स्थापित नेतृत्वलाई रबर स्टाम्पको अनुमोदन गरेर सकिने छाँट छ कि नेतृत्वमा नयाँ अनुहारको साथै नयाँ मानसिकता, नयाँ कार्यशैली पनि हुनेछ ? चहलपहल निकै छ । तर वैचारिक पुनर्जागरणको चहलपहलभन्दा फगत अनुहारको रित्तो सल्बलाहट पाईंदैछ ।
डा. शेखर कोइरालाको अभियान र मिहिनेतलाई कमजोर मान्नु हुँदैन । उनले आफ्ना सहकर्मीहरूको उम्मेद्वार प्यानलमा समावेशी, सन्तुलन, योग्यता सबै क्राईटेरिया मिलाए भने डा. शेखरको सम्भावना निकै उच्च देखिन्छ । अन्तिम बेलामा आएर बीपी पुत्र डा. शशांकबाट पनि शेखरकै लागि उम्मेद्वारी त्याग्ने काम भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
यस दिशामा वैचारिक रुपले सम्पुष्ट महाधिवेशन बनाउने कुरामा डा. शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह के.सी. अरुभन्दा अगाडि देखिएका छन् । नत्र अन्य दावेदारहरूबाट पार्टीको नीति, सिद्धान्त, रणनीति, लक्ष्य, संकल्प जस्ता विषयमा छलफल, बहस, चिन्तन र मन्थन कतै सुनिएको छैन । अनुहार देखाएर पद हत्याउने जोडमा मात्र छन् । तसर्थ वैचारिक अनिकाल आजको कांग्रेसको ऐंजेरु हुनपुगेको छ, जहाँ पदको तानातान र हानथाप छ । सिद्धान्त सिद्धिएर रित्तो देखिएको बेला नेताहरू लोकतन्त्रका रित्ता ढ्वाङ्जस्तो लाग्छ । त्यस्तो लक्षणले कांग्रेसलाई ग्रसित बनाउन लागेको छ । यसलाई सकारात्मक चेतनाको रुपमा लिऔं ।
रामचन्द्र पौडेल वा शेरबहादुर देउवामध्ये एक नै कांग्रेसका आठौँ सभापति होलान् भन्ने सुनिश्चितता छैन । डा. शेखर कोइरालाको अभियान र मिहिनेतलाई कमजोर मान्नु हुँदैन । उनले आफ्ना सहकर्मीहरूको उम्मेद्वार प्यानलमा समावेशी, सन्तुलन, योग्यता सबै क्राईटेरिया मिलाए भने डा. शेखरको सम्भावना निकै उच्च देखिन्छ । अन्तिम बेलामा आएर बीपी पुत्र डा. शशांकबाट पनि शेखरकै लागि उम्मेद्वारी त्याग्ने काम भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
उम्मेद्वारी किन ? अनुत्तरित प्रश्न
महाधिवेशनको भव्यतालाई कांग्रेसले सामान्य भीडका रूपमा प्रस्तुत गर्न पुग्नु राजनीतिक बिडम्बना हो । कांग्रेसप्रति यथावत रहेको जनआकर्षणलाई हेर्दा जनमतले होइन, सङ्गठन निर्माण तथा परिचालन गर्ने नेताहरूले नै जनसमर्थन फ्याँक्दै हिँडेको कारणले कांग्रेस कमजोर भएको अर्थ र दोष नेतृत्वमाथि जान्छ । महाधिवेशनका क्रममा कांग्रेसको दलीय आचरण र सामुहिकताको भावनालाई होइन, असहमत हुने सबैलाई पछारेर आफू बलियो हुन निर्दलीय आचरण र खुट्टा तान्ने मनोवृत्ति अभिब्यक्त हुने परिपाटी नै बसिसक्यो । पार्टीभित्र वैचारिक बहस होइन, नसुध्रिएको आपसी ‘रगडा’को पराकाष्टा भएर महाधिवेशन आइरहेको छ ।
तानशाहको पनि पार्टी हुन्छ । मौरी, कमिला आदि समुहमा बस्ने प्राणी हुन् भने सलह, धमिरा, अरिँगाल, बाँदरहरू पनि समुहमै बस्ने प्राणी हुन् । तर धमिरा र मौरीको सङ्गठनात्मक आचरण वा गतिविधि फरक हुन्छ । आतङ्ककारी सञ्जाल, अण्डरवल्र्ड वा डाँकाको पनि सङ्गठन हुन्छ । त्यसकारण पार्टी हुनका लागि सङ्गठन हुनुपर्छ भन्दैमा त्यसको सामाजिकता र मानवीयता बिर्सन मिल्दैन ।
कांग्रेसबारे जनतामा सकारात्मक चासो र आकर्षण उर्लेर आएको कुरा धरातलीय यथार्थ हो । तर यो आकर्षण र जागरणबारे साविकको नेतृत्वले आत्मसात गर्ने इच्छाशक्ति देखाएको छैन । जनताले पार्टी (हरू)बारे आफ्ना धारणा ब्यक्त गरिरहेको हुन्छ । तर जनभावनालाई संस्थागत रूपले समेट्ने र जनताका मनसँग खेल्ने कला नेतृत्वले देखाउने गरेको छैन । महाधिवेशनमात्र नयाँ हो, नेतृत्वका अनुहारहरू प्रायः पुरानै हुन् । अब पनि बासी विचार, नसुध्रेकाे प्रवृत्ति र यसका सिद्धान्त तथा मान्यतासँग तालमेल नहुने स्वभाव बोकेर पार्टी हाँक्छु भनी कसैले सोचेको छ भने त्यो साह्रै अनर्थ हुन्छ ।
कम्युनिष्टहरूको पार्टी हुन्छ र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने शक्तिको पनि पार्टी हुन्छ । तर त्यो पार्टीको जनतासापेक्ष नियत कस्तो छ, त्यसैले नै त्यसपार्टीको अल्पायु वा दीर्घायु निर्धारण गर्दछ । लोकतन्त्र भनेको घोक्ने कुरा होइन, गरेर देखाउने कुरा हो । ‘समाजवाद’ किताबमा लेख्ने (मात्र) कुरा नभै पार्टीको सामाजिकीकरण प्रक्रियाको मार्गदर्शन हो । त्यसकारण कांग्रेसले आफुलाई समाजवादी भनाउन समाजवादप्रतिको उसको धारणा र आचरण प्रष्ट पार्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा पार्टीतन्त्र हावी भयो भने त्यहीँबाट तानाशाहको उत्थान हुन्छ ।
कांग्रेसमा अबको आवश्यकता
कांग्रेसले आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त र मार्गदर्शनको पुनःपरिभाषा गर्ने बेला आएको छ । परिभाषाको घोषणाले मात्र हुन्न त्यसमा टिक्ने आचरण र इच्छाशक्ति पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यो महाधिवेशनमा उसले नीति र कार्यक्रममा भन्दा निर्वाचन र नेतातिर सम्पूर्ण ध्यान एकोहो¥याइरहेकोले वैचारिक पक्ष मृतप्रायः भएको छ । कांग्रेसले अब अर्को संघर्ष चलाउनुपर्छ । यसले आफ्नै नियत, मनोवृत्ति र कार्यशैलीसँग संघर्ष गरेर जित्न सक्नुपर्छ ।
जुनसुकै पार्टी होस्, त्यसले निर्वाचन र नीतिगत रूपमा दुई छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पाठ कांग्रेस र एमाले दुवैका महाधिवेशनहरूले सिकाएका छन् । नत्र निर्वाचनको कोलाहलले नीतिगत पक्षलाई अन्धकारतिर धकेल्ने रहेछ । नीतिबिनाको नेतृत्व ब्यर्थ मात्र होइन, खतरनाक पनि हुनसक्छ । नीतिगत कार्यप्रक्रिया नहुँदा ‘हुकुमी’ वा ‘हैकमी’ कार्यशैलीले प्रश्रय पाउँछ ।
खासगरी पञ्चायत आएपछि कांग्रेसमा नीतिमुखी नभएर नेतामुखी एवं हैकमी शैलीले यसरी पश्रय पाउँदै गयो कि आखिर त्यो नै कांग्रेसको परम्परा बन्नपुग्यो । अब यस पार्टीले वस्तुस्थितिका साथै मनस्थितिमा पनि परिवर्तन भएको देखाउन सक्नुपर्छ । कांग्रेस अब पार्टीजस्तो होइन, पार्टी नै बनेमात्र त्यसले दिग्विजयी बन्न र दीर्घायु पाउन सक्दछ ।